Okpomoku: Kwado, mepụta, ma bulie Detuo na AI | Martech Zone
Thursday, July 16, 2020 Friday, July 17, 2020 Douglas Karr
Gbochie na-eji asụsụ AI nke emepụtara iji nweta ike oyiri maka ụdị ụwa niile ma na-ewepụta asụsụ ọhụrụ, nke a na-ahụtụbeghị mbụ na oge, na-eji ọgbọ asụsụ okike na mmụta miri emi.
Isi Okwu Ikwu Okwu
Akpaokwu bụ teknụzụ AI nke na-eji ahịrị isiokwu email gị dị ka ụlọ nyocha asụsụ. Asụsụ dị iche iche jikọtara iji chọpụta ụdị asụsụ edepụtara maka akara gị. Mgbe ahụ, AI na-etinye ụdị asụsụ asụsụ gị pụrụ iche n'ofe mkpọsa ahịa gị niile - site na email ịkwanye, mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji gosipụta, nyocha akwụ ụgwọ na weebụ.
Tupu Akpaokwu, ị ga-atụkwasị obi na ebumpụta ụwa mmadụ. Ma eleghị anya nke ahụ rụrụ ọrụ na 90s. Ma na-ekpe ekpere gị gootu nwetara ya nke ọma dị nnọọ adịghị ebipụ ya ọzọ. Ná nkezi, nkebi ahịrịokwu na-anapụta karịa 700,000 mmeghe mmeghe yana pịa puku 56,000 kwa mkpọsa.
Isi okwu AI-Powered Copywriting Overview
Email nkebi ahịrịokwu - Njirimara AI nke nwere ike ime ka ị mepee, pịa, na ntụgharị. Mmekọrịta gụnyere Salesforce, MovableInk, Sailthru, Acoustic, na Adobe.
Nkebi ahịrịokwu Push - na-eji AI iji mepụta gị ozi kachasị mma karịa ụmụ mmadụ.
Okwu ahịrịokwu Social - na-eji AI iji nweta ozi ka mma maka mgbasa ozi mgbasa ozi Facebook na Instagram, niile na pịa bọtịnụ.
Ahịrịokwu N’ebe niile - jiri AI iji melite nnomi weebụ, gosipụta mgbasa ozi, mkpọsa ọchụchọ akwụ ụgwọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị n'etiti.
AI-Kwadoro Email Isiokwu Jiri Ikpe
Na 2016, eBay nakweere teknụzụ AI wee goro ya Gbochie iji mee ka ahịrị ederede email ya wee pịa ọkwa mara ihe karịrị ndị debanyere aha email nde 101 n'ụwa niile. N'ihi ya, ahịrịokwu agbanweela arụmọrụ ahịa eBay kpamkpam yana otu esi agwa ndị ahịa okwu n'ịntanetị. eBay ahụwo:
Ntughari onu ogugu 15.8%
A 31.2% nkezi pịa ọnụego uplift
Site na ịchacha asụsụ niile na ahịrị isiokwu na isi okwu n'ime email ahụ, mmetụta dị na ya na-atụ ụjọ 42.3% kwalite na ọnụego pịa.
Akwụkwọ a Nkebi ahịrịokwu Demo
Tags: aimepụta usoro isiokwuebuli push oziebuli push ificationsma Ọkwaebuli ederede mgbasa ozi mmekọrịtaebuli ahịrị isiokwuakwụ ụgwọ ọchụchọ aiakpaokwuule ederedeoyiri weebụ ai
Ndepụta ndepụta: Otu esi emepụta ọdịnaya nke gụnyere